Nyika Inova Paradhiso! | Bhaibheri Rinombotaura Nezvei?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Chiyao Chol Croatian Czech Danish Digor Douala Dutch Estonian Faroese Finnish French Fulfulde (Cameroon) Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Irish Italian Japanese Kabyle Kazakh Kekchi Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Sorani Kwanyama Laotian Latvian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Miskito Mixtec (Huajuapan) Mongolian Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEstonia Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndonga Nepali Ngabere Nias Norwegian Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Romany (Southern Greece) Russian Sepedi Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Thai Tlapanec Tojolabal Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Udmurt Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Nyika Inova Paradhiso!
Achishandisa Umambo hunotungamirirwa naKristu, Jehovha anotsvenesa zita rake, anoreverera uchangamire hwake, uye anobvisa uipi hwose
BHUKU rokupedzisira reBhaibheri rinonzi Zvakazarurwa rinopa vanhu vose tariro. Rakanyorwa nemuapostora Johani, uye bhuku racho rine zvaakaratidzwa zvinoguma nokuzadzika kwechinangwa chaJehovha.
Mune zvakaratidzwa Johani pakutanga, Jesu akanga amutswa anorumbidza uye anoruramisa ungano dzinoverengeka. Zvinotevera zvinotiratidza chigaro choumambo chaMwari chokudenga uko zvisikwa zvemudzimu zvinenge zvichimurumbidza.
Chinangwa chaMwari zvachinoenderera mberi, Gwayana, Jesu Kristu, rinopiwa mupumburu une zvisimbiso zvinomwe. Panovhurwa zvisimbiso zvina zvokutanga, vatasvi vemabhiza vokufananidzira vanoonekwa panyika. Wokutanga ndiJesu ari pabhiza jena aine korona saMambo. Panozotevera vatasvi vari pamabhiza, rimwe nerimwe riine ruvara rwaro, nenzira youprofita anomiririra hondo, nzara, uye zvirwere—zvose izvi zvinoitika mumazuva okupedzisira emamiriro ezvinhu epanguva ino. Kuvhurwa kwechisimbiso chechinomwe kunotisvitsa pakuridzwa kwemabhosvo manomwe okufananidzira, zvinoreva kuziviswa kwemashoko aMwari okutonga. Izvi zvinotungamirira kumatambudziko manomwe okufananidzira, kana kuti kuratidzirwa kwehasha dzaMwari.
Umambo hwaMwari, hunotsanangurwa semwanakomana achangoberekwa, hunogadzwa kudenga. Hondo inotanga, uye Satani nengirozi dzake dzakaipa vanokandirwa panyika. Inzwi guru rinodanidzira kuti, “Mune nhamo imi nyika.” Dhiyabhorosi akatsamwa kwazvo, achiziva kuti ane nguva pfupi.—Zvakazarurwa 12:12.
Johani anoona Jesu ari kudenga achimiririrwa negwayana, aine vane 144 000 vakasarudzwa pakati pevanhu. Ivava “vachatonga [naJesu] semadzimambo.” Naizvozvo, Zvakazarurwa inobudisa pachena kuti nhamba yedzimwe nhengo dzinoumba mbeu inosvika 144 000.—Zvakazarurwa 14:1; 20:6.
Vatongi venyika vanoungana paAmagedhoni, “hondo yezuva guru raMwari Wemasimbaose.” Vanorwisana nemutasvi webhiza jena—Jesu, uyo anotungamirira mauto ekudenga. Vatongi vose venyika ino vanoparadzwa. Satani anosungwa, uye Jesu nevane 144 000 vanotonga panyika “kwemakore ane chiuru.” Pakupera kwemakore ane chiuru, Satani anoparadzwa.—Zvakazarurwa 16:14; 20:4.
Kutonga kwemakore ane chiuru kwaKristu nevaanotonga navo kunorevei kuvanhu vanoteerera? Johani anonyora kuti: “[Jehovha] achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve. Zvinhu zvokutanga zvapfuura.” (Zvakazarurwa 21:4) Nyika inova paradhiso!
Naizvozvo bhuku reZvakazarurwa rinopedzisa mashoko eBhaibheri. Kuburikidza noUmambo hwaMesiya, zita raJehovha rinotsveneswa uye uchangamire hwake hunorevererwa zvakakwana nokusingaperi!
—Kubva mubhuku reZvakazarurwa.
Vatasvi vemabhiza vokufananidzira vanomiririrei?
Zvii zvinoitika chinangwa chaMwari pachinenge chichienderera mberi?
Amagedhoni chii, uye inoguma nei?
Mubhuku reZvakazarurwa, zvitendero zvose zvenhema—kureva zvitendero zvose zvinopesana naMwari wechokwadi—zvinozivikanwa zvose pamwe chete se“hure guru.” Rinonzi “Bhabhironi Guru,” uye rinozvitengesa kune masimba ezvematongerwo enyika, kana kuti rinoita ufeve nawo. Zvakazarurwa inoti, panguva yakasarudzwa yaJehovha Mwari, masimba iwaya acharipandukira ndokuriparadza.—Zvakazarurwa 17:1-5, 16, 17.
Vakawanda vanoziva munamato waShe. Mashoko okuti: “Umambo hwenyu ngahuuye” anorevei?